Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka gaadiidka Railway | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulFaa'iidooyinka iyo faa'iido darrada gaadiidka Tareenka
11 / 04 / 2018 34 Istanbul, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, TURKEY
Bilaabidda tigidhada yht waxaa lagu iibsan doonaa iyadoo lagala laabto arjiga
Gaadiidka tareenka, oo loo diido inuu yahay habka ugu nabad gelyada badan adduunka, ayaa si firfircoon loogu isticmaalaa meelo badan oo adduunka ah. Tusaale ahaan, Switzerland waa dalka ugu horreeya ee maskaxda ku yimaadda markay tahay tareenka. Dadku waxay ku soo qulqulaan waddankan sababta oo ah safarka tareenka. Waxaa loo sameeyay safarka tareenka ee qaata maalmo.
Isugeynta dhererka wadooyinka tareenka dalkeenu waa nasiib darro qiyaastii 9 kun oo kiiloomitir. Dhab ahaantii, waa wax wanaagsan. Sababtoo ah magaalooyin badan ayaan lahayn waddo tareen, maalgashiyo muhiim ah oo arrintan la sameeyo lama sameeyo. Si kastaba ha noqotee, marka la eego labadaba gaadiidka rakaabka iyo kan xamuulka qaada, haddii aan u soo qaadan karno safarka tareenka, annaga nafteena waxaan ku siin karnaa fursad dhinacyo badan ah. Laakiin nasiib xumo, gacmaheena kuma saari karno dhagaxa aaggan sabab uun awgeed.
Faa'iidooyinka Gaadiidka La Raaco
Gaadiidka tareenka waa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee gaadiidka marka loo eego qiimaha, waqtiga iyo isku halaynta. Intaa waxaa u dheer, markii ay sii kordhayaan tirada gaari-gacmeedyada, xaddiga xamuulka qaada iyo tirada rakaabka ayaa kordha. Tani waxay kordhineysaa awoodda qaadista. Si kale haddii loo dhigo, waddo waxay leedahay xamuul ka culus kan duulista hawada waxayna bixisaa qiimo jaban.
Dhanka kale, gaadiidka tareenka waa mid ka mid ah hababka gaadiid ee wasakheeyay deegaanka. Intaa waxaa dheer, waxay siisaa gaadiid badan oo la awoodi karo guud ahaan culeyska culus iyo kan culus. Maaddaama aysan jirin dhibaato gaadiid, waqtiga sugitaanka ayaa loo tixgelin karaa ugu yaraan. Waxa kale oo aad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan wakhtiga keenista badeecadaada wakhtiyada duullimaadyada go'an.
Haddii aad sidato xamuul culus oo aadan lahayn waqti xaddidan, si kastaba ha noqotee, waxay noqon doontaa habka ugu macquulsan ee gaadiidka haddii ay jirto wado tareenka meesha ugu sareysa iyo halka loo socdo. Muhiimadda tareenka waa mid aad muhiim u ah gaar ahaan gaadiidleyda macdanta sida dhuxusha, taasoo loo aaneeyey isha dhulka.
Faa'iido darrooyinka gaadiidka tareenka
Faa'iidada ugu weyn ee gaadiidka xadiidka waa kaabayaasha oo aan ku filneyn. Si kastaba ha noqotee, keenida xaddidan ayaa kordhisa faa'iido darrooyinka. Gaar ahaan markaan tixgelinayno inaysan lahayn waddo-tareenno gobollo badan oo dalkeenna ka mid ah, dhibaatadan ayaa ka sii dareysa. Marka laga soo tago taas, lama dhihi karo waxay leedahay cilado badan.
Muhiimadda Gadiidka Wadada
Sababtoo ah la'aanta wadooyinka tareenka ee horumarsan ee waddankeena, ma gaari karno macluumaad badan. Si kastaba ha noqotee, gobollada leh wadooyinka tareenka, gadiidka tareenka oo laga doorbiday in ka badan habka kale ee gaadiidka ayaa aad muhiim u ah. Sidoo kale, sanadkii ugu horreeyay ee 25 ee jamhuuriyadda, ku dhawaad ​​hal kun oo kiiloomitir oo tareenka ayaa la dhisay, laakiin tiradaasi xitaa ma aysan gaarin kun kiiloomitir ilaa sannadihii 4. Markay tahay 2010, waxaan u kordhinay lambarkan illaa xad yar oo leh tareenka xawaaraha sare u socda magaalooyin dhowr ah.
Haddii aan rabno inaan ku noolaano barwaaqo, waa inaan kordhinaa maalgashiga kaabayaasha oo aan kordhinaa wax soo saarka. Hadaad rabto inaad hesho macluumaad ku saabsan gaadiidka tareenka, waxaad booqan kartaa bogga saadka ee loo yaqaan 'Borusan Logistics'.
Faa'iidooyinka Tareenka Xawaaraha Sare
Keyhan Translation Office Faa'iido
Duqa Magaalada Yılmaz wuxuu kordhin doonaa faa'iidooyinka gobolka ee Samsism Village Samsun
Gaadiidka Tareenka Waqooyi Amerika wuu kordhayaa
Gaadiidka tareenka Mareykanka ayaa kor u kacay Janaayo
Gaadiidka tareenka ee Waqooyiga Ameerika ayaa kordhay bishii Abri